UKhozi aluyibhekisise eyokubambelana | IOL Isolezwe
UKhozi aluyibhekisise eyokubambelana
Isolezwe / 26 June 2012, 11:40am /
UTSHATHUGODO Ngobe angaba umsakazi okahle ukubambela uLinda uma engekho emsebenzini kungalandwa noma imuphi umsakazi ngoba lokho kuyalibulala uhlelo
KUMELE lufakelwe izibuko udaba lokubambelana kwabasakazi emsakazweni uma omunye engekho. Kunomkhuba omubi owenziwa abaphathi bezinhlelo, bavele bafake noma imuphi umsakazi uma omunye engekho.
Ake ngenze isibonelo esilula, ukungabi khona kukaGlen Lewis, kuvele kufakwe uZandile ‘Zeal’ Dladla, isitayela salaba basakazi sihluke kakhulu kanti iningi labantu bamgcina ezinhlelweni zangempelasonto uZeal. Ngisasho namanje ukuthi kungakuhle imisakazo eminingi ikopele esitayeleni se-East Coast Radio. Lo msakazo wenza isiqiniseko sokuthi awuzweli kakhulu uma kungukuthi umsakazi wakho omthandayo nomkhonzile akekho emoyeni. Kuyona futhi iMetro FM uma uTbo Touch engekho bavele bakulandele uWilliam ‘Chinese Guy’ Lehong. Isitayela sokusakaza sikaLehong asifani nakancane nesikaTbo Touch. IChinese Guy ayiyona umuntu we hip-hop kanti uma isakaza iyagijima, futhi ayisona isichomane njengoTbo Touch. Ngiyamkhumbula uVicky Masuku emsakazweni, ungumuntu ozaziyo izinto kanti futhi uma esakaza uba nokujikijela amahlaya lapha nalapha abantu bahleke kube mnandi. Ngingajabula uma uDudu Khoza engekho kufakwe uVicky ukuthi kube uyena obambile kunokuthi ulande umuntu onjengoMandla Magwaza uthi akube uyena obambile. Phela lolu hlelo yilona nolwenza abantu besifazane baziqhenye ngomsakazo nanokuthi nabo bamelelekile kule ndima. Uma sewuthatha uMandla usuke sewuyikhipha emgqeni. Ungangizwa kabi, akukho okubi ngoMandla kodwa mina ngiyazi ukuthi ungamfaka uma engekho uSipho ‘Sgqemeza’ Mbatha ngoba ungumuntu wobumnandi kumbe esimeni esinzima umfake esikhundleni saMandla Mdletshe kwazise banamazwi amakhulu bobabili. Iphuzu lami lithi akungazwakali kakhulu uma omunye umsakazi engekho.
Ngesonto eledlule uLinda Sibiya uke wangaba khona emoyeni, uKhozi FM laphinde lenza elikhulu iphutha lathatha uKhetha Gwala ongasaziwa emoyeni lathi akube uyena ombambelayo.
Ngiyacabanga ke ukuthi ubudedengu obufana nalobu buyenzeka uma umphathi wezinhlelo engekho. Ngizwa kuthiwa uZandile Tembe ongumphathi wezinhlelo usathe ukuhlaba ikhefu, bulindelekile-ke ubudedengu balolu hlobo.
ULinda unabalandeli abaningi ngendlela eyisimanga emsakazweni, ngicabanga ukuthi kuwukungamhloniphi umlaleli ukuthatha uKhetha uthi akabambele uLinda. Okokuqala nje uLinda uba namahlaya uma esakaza, uKhetha akanawo nanokuthi yena usaziwa njengomphathi wezinhlelo hhayi umsakazi. Mhlawumbe uma kuwuhlelo olungenawo amandla njengolukaLinda ungamnika ngineqiniso lokuthi vele uhlezi enaso isifiso sokuba semoyeni. Kodwa akungalinyazwa umlaleli ngalesi sinqumo sabo. Iqiniso ukuthi umsakazi ongaconsi phansi kubalaleli boKhozi FM ongenza into engcono uma engekho uLinda kungaba uTshath’ugodo. Isono sikaTshatha siyaziwa akekho ongasazi, kwaba yileso sokuzethula emsakazweni njengomuntu kamaskandi kuphela kodwa yena abantu bayamthanda. Ngendlela elwenza ngayo uKhozi FM lubeka isithombe sokuthi akekho omunye umsakazi ongabambela uLinda ekubeni uTshatha ngokugadwa abantu abaziyo ngomsakazo, engenza umsebenzi omuhle.
Ozakwethu esinabo baveza okukhulu ukungenami kwabo ngokufakwa kukaKhetha, abanye bathi bavele bawushintsha umsakazo ngemuva kokubona ukuthi uLinda akekho.
IRadio 2000 yenza into enhle ngokuthi uma engekho uThabiso Tema bafake uJust Ice ohlelweni lwakhe, ngisho noma enza uhlelo lwasekuseni kodwa kuyazwakala ukuthi uyazilandela izinto. Lomsakazo awulenzi iphutha u-Just Ice uze angene kabili kunokuthi bathathe noma imuphi umsakazi.
Imisakazo ayenze isiqiniseko sokuthi ifaka abasakazi abangakwazi ukuzibamba ziqine.